‘प्रचण्ड जनयुद्दका नायक : एक ऐतिहासिक दस्तावेज’
पूर्वमेयरको निधनमा धरानमा भोलि शोक बिदा
– सिएन गौतम
मङ्गलबार १७, भदौ २०७६
अत्यन्त सामान्य तहबाट उठेर दक्षिण एसिया र विश्वमा नै एक चर्चित र प्रभावशाली बन्न सफल नेताहरुमध्येमा प्रचण्ड पर्दछन् । तल्लो वर्गको मुक्तिका लागि एक दशकभित्र त्यति धेरै मान्छेहरुलाई सङ्घर्षको मैदानमा मर्छु या मार्छु भनेर जनयुद्धमा होमिन लगाउनु चानचुने कुरा होइन र यो साहस धेरैमा हुँदैन पनि ।
विद्रोहले देशमा कहिल्यै फाल्न नसकिने र जकडिएर बसेको तत्वलाई जरैदेखि फालेर परिवर्तन गराएको छ । यसलाई उपलब्धि मान्न सकिन्छ तथापि केही कमिकमजोरी अवश्य नै देखिन्छ्न् ।
वास्तवमा प्रचण्डको जीवन दुःख र कष्टको समुद्र हो । अहिले पनि एउटा छुट्टै नयाँ महासागर बन्ने क्रममा अघि बढेको देखिन्छ । समय र परिस्थितिले एक मानिसलाई नायक र खलनायक बनाउने गर्दछ ।
जनयुद्ध हुँदा उनी नायक थिए तर अहिलेको पुस्ता र वर्तमान धारणामा उनी नायक भित्र पर्दैनन् तर खलनायक पनि बनिसकेका छैनन् । यसबारे बोध गराउन पनि यो पुस्तक रामप्रसाद खरेलले तयार गरे जस्तो लाग्छ ।
यस पुस्तकमा लेखक खरेलले प्रचण्डसँग जोडिएका सुनेका कुरा, कथा या यस्तै मनगढन्ते सतही कुरा नगरेर सबै आधिकारिक र तथ्यपूर्ण कुरा लेखेका छन् । यो पुस्तक तयार गर्दा सन्दर्भ सामाग्रीका रुपमा ३४ वटा पुस्तक १९ वटा भिडियो अन्तर्वार्ता र २७ वटा विभिन्न पत्रिका अनलाइन संस्करणको अन्तर्वार्तालाई आधार बनाएको देखिन्छ ।
यसरी हेर्दा यो लेखनदेखि पुस्तक तयार पार्दा लेखकलाई निकै गाह्रो भयो होला भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । जे होस् यस पुस्तकले प्रचण्ड बारे मात्र होइन देशको तत्कालीन सामाजिक, राजनितिक, देशको परिस्थिति र घटनाहरुको एउटा दर्पणको रुपमा काम गर्छ ।
लेखकले सुरुमै प्रचण्डबारे यसो भन्छन्, ‘यो महान् उपलब्धि लाखौं जनसमुदायको एवम् क्रान्तिकारी अकथनीय दुःख, कष्ट, त्याग, तपस्या, वीरता, शौर्य र बलिदान ऐतिहासिक कीर्तिमानहरुको भव्य जगमा खडा भएको छ ।’
यसको मतलब जनयुद्धबाट खडा गरेको जग र खडा गर्नेलाई नबिर्सने तथा यसलाई बलियो बनाउदै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो ।
त्यसैगरी प्रचण्डलाई सजग गराउँदै लेखक फेरि लेख्छन्, ‘जनयुद्द र प्रचण्ड परिपूरक हुन् ।’
प्रचण्डले समृद्द देश बनाउने जिम्मा काँधमा बोकेर हिडेको सत्य हो । देश बोक्ने मान्छेलाई गले भन्ने छुट हुँदैन÷छैन । बरु देश बोक्दा बोक्दै मर्न तयार हुनुपर्छ ।
रामप्रसाद खरेलले यसमा प्रचण्ड वा उनीसँग जोडिएका परिवारजन वा आफन्तको महिमा गान हुने हिसाबले लेखेका छैनन् । लेखक तटस्थ बसेका छन् ।
जस्तै, प्रचण्ड पुत्र प्रकाशको बारेमा आम मानिसको धारणा फरक फरक थियो । एकातिर प्रकाश सफा मन भएका इमान्दार मानिस भन्ने गरिन्थ्यो भने अर्कातिर अलिक सन्की स्वाभाव भएको मानिसको आरोप पनि लगाइन्थ्यो । यसरी
प्रचण्डको धनसम्पत्तीबारे बेलाबखत आइरहने चर्चा परिचर्चा बारे पनि लेखक खुलेरै लेख्छन्, ‘कसैको ठूलो घर देखे यसमा प्रचण्डको लगानी छ भनेर मानिसले भने ।अपार्ट्मेण्ट, हस्पिटल वा ठूला कम्पनी कसैले खोल्यो भने यो प्रचण्डकै हो भनेर भनियो । वास्तविकता के हो ? त्यो त एकदिन बाहिर आइहाल्छ नि । खासगरि एमालेसँग पार्टी एकता भएपछी प्रचण्डको लगानी बिस्तारै हराउँदै गयो ।’
लेखकले जनयुद्धको लडाइँको मैदानमा अग्रपंक्तिमा उभिने नायकहरुको प्रतिनिधि रुपमा प्रचण्ड त्यसबेला रहेको र अझै पनि देश बनाउने एउटा नायकको रुपमा हेरिएको जिकिर गरेका छन् ।
यो पुस्तक इतिहासको एउटा दस्तावेज हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यो पठनीय छ । यस पुस्तकमा प्रचण्डको सङ्क्षिप्त जीवनी जनयुद्ध, कम्युनिस्टहरुसँगको मिलाप र विद्रोह, प्रचण्डपथको औचित्य र समाप्ती, प्रधानमन्त्रीको अवतार र नेपालकै महान् पार्टी नेकपाको अध्यक्ष लगायत अन्य थुप्रै विषयहरु यसमा पढ्न सकिन्छ । यसका लेखक रामप्रसाद खरेललाई हार्दिक बधाई दिन्छु । कलम निरन्तर चलिरहोस् ।
सुनिल थापासहितका नेता कांग्रेस प्रवेशको तयारीमा
ट्राफिक कारवाहीको पासोमा ‘माग्ने बुढा’, दिए धन्यवाद !
सभामुखको उम्मेदवारी पार्टीले नदिँदा गगन थापाको असन्तुष्टि
आस्था राउत पछि ज्योती मगर विवादमा, भयो यस्तो लफडा !